နောင်တစ်ချိန်တွင် နောင်တမရမည့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုကို ရွေးပါ - Myanmar Network
နောင်တစ်ချိန်တွင် နောင်တမရမည့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုကို ရွေးပါ
Posted by Betty on October 26, 2015 at 11:25 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
ဘယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်ကဖြင့် ရေရှည်မှာအဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလဲဆိုတဲ့ ရွေးချယ်မှုပြဿနာဟာ ကျွန်မတို့ နေစဉ်နေ့တိုင်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါ။ ပရောဂျက်အသစ်အတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းပဲ လုပ်ပေးရမလား။ လစာတိုးပေးဖို့ပဲတောင်းဆိုရမလား။ လေ့လာရေးခရီးပဲ ထွက်လိုက်သင့်လား။ အချိန်ပိုဆင်းပေးဖို့ လက်ခံလိုက်ရမလား။ နေ့တိုင်း မေးခွန်းများစွာထဲမှ အသင့်တော်ဆုံးကို ရွေးချယ်ဖို့အတွက် ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်မတို့တွေဟာတကယ့်အကြီးမားဆုံး ရွေးချယ်မှုတွေကို လက်လွတ်ခဲ့ရတာတွေကြောင့် ကုန်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ နှစ်ပေါင်း၂၀ကို စိတ်ကျေနပ်မှုတွေ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ဒါမှမဟုတ် နောင်တတွေနဲ့ ပြန်ပြောင်းလှည့်ကြည့်မိတတ်ကြပါတယ်။
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေကတော့ ကျွန်မတို့တွေ မကြာခဏ လုပ်မိတတ်တဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေထဲက နောင်တရစေတတ်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေပါ။
၁။ အရေခြုံခြင်း (Pretending to be something you’re not)
သင့်ရဲ့သူဌေးဆီက အထင်ကြီးမှုကို လိုချင်လို့ အားကစားတစ်ခု ဝါသနာပါဟန်ဆောင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဘာတစ်ခုမှ မပြောပဲ ပါးစပ်ပိတ်နေခြင်း၊ တစ်ခုခုမှာ ထူးချွန်နေသူအဖြစ် ဟန်ဆောင်ခြင်း စသည်တို့ဟာ သင့်အတွက်တော့ မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ ထပ်ကာထပ်ကာ ဟန်ဆောင်နေခြင်းဟာ သင့်ကိုယ်သင် လိမ်ညာနေတာဖြစ်သလို နောက်ဆုံးသင့်မှာဘာမှ မကျန်ခဲ့ဘူးဖြစ်သွားမှာပါ။
၂။ ပိုက်ဆံရဖို့တစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ခြင်း (Making decisions based only on money)
သင့်ရဲ့လစာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် (သို့) ပရောဂျက်ကုန်ကျငွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ငွေကြေးတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာ ဘယ်လိုမှကောင်းတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ငွေကြေးကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငွေကြေးထက် ပိုအရေးကြီးတဲ့ အရာတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ သင့်ရဲ့ခံစားချက် အပါအ၀င် အခြားအရာတွေကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားရပါမယ်။
၃။ လုပ်ငန်းခွင်မှာပြောင်းလဲဖို့ စဉ်းစားခြင်း (Thinking you can change something about the job)
"ဒါလေးတစ်ခုသာပြင်လို့ရခဲ့ရင် ဒီအလုပ်ကအရမ်းကို ကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်လာမှာပဲ။" လို့တွေးပြီး အလုပ်တစ်ခုကိုဝင်လုပ်မိပြီဆိုရင်တော့ သင် နဲနဲအတွေးလွဲနေပါပြီ။ အကယ်၍ သင်က တကယ့်ထိပ်ပိုင်းရာထူးတစ်ခုကို တာဝန်ယူရတာမျိုးမဟုတ်ပဲ အလုပ်ဌာနတစ်ခုမှာ အခြေခံကျကျချွတ်ချော်နေတာတွေကို ပြင်ဖို့ဆိုတာ အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။
၄။ သာမန်အခြေအနေဖြင့် ကျေနပ်နေခြင်း (Settling)
သင့်မှာအဆင်ပြေတဲ့ အလုပ်ရှိနေပြီး၊ လစာရောအကျိုးအမြတ် ခံစားခွင့်တွေရောကောင်းကောင်းရနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်တကယ်လိုချင်နေတာက ဒီအဆင့်ပဲလား။ သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ လခတိုးတောင်းဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခွင့်အရေးတစ်ခုရဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရဲရဲဝင့်ဝင့်ရအောင်လှုပ်ရှားလိုက်ပါ။ သာမန်ကျေနပ်နေရုံအဆင့်မှပဲ ငြိမ်မနေပါနဲ့။
၅။ တစ်ပတ်ကိုနာရီပေါင်း ၅၀၊ ၆၀၊ ၈၀ အလုပ် လုပ်ခြင်း (Working 50, 60, 80 hour weeks)
သင့်သူဌေးဆီက မျက်နှာသာရချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပိုက်ဆံရချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အခုထက်ပိုပြီး အလုပ်လုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှတော့ သေခါနီးမှာ……. “အိုး…ငါဒီထက်ပိုလုပ်နိုင်ချင်ခဲ့တာ…” ဆိုတာမျိုးကိုပြောကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၆။ မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဦးစားမပေးခြင်း (Putting friends and family last)
သင်ဟာ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ အောင်မြင်နေဖို့ဆိုရင် သင့်ကိုပံ့ပိုးပေးမည့်သူတွေနဲ့ ဝန်းရံရမှာပါ။ များသောအားဖြင့် အဲ့ဒီလူတွေဟာ သင့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ အလုပ်သမားတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မိသားစုတွေပါ။ အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ဖျက်ဆီးပြီး သင့်ရဲ့အလုပ်အောင်မြင်ဖို့ကိုပဲ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ သင်မျှော်လင့်သလို အများကြီးအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
၇။ နေရာတကာဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း (Micromanaging everything)
ဒီအပြုအမူကို သင့်ရဲ့ အဖွဲ့တွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့တင်မဟုတ်ဘဲ သင့်ရဲ့ လူမှုဘ၀ထဲမှာပါ လုပ်ကောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ကိစ္စတွေကို ဒီတ်ိုင်းထားလိုက်မယ့်အစား၊ နေရာတိုင်းလိုက်ပြီး အသေးစိတ် စီမံခန့်ခွဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေနဲ့ပဲ ပြည့်နေပါလိမ့်မယ်။
၈။ မလှုတ်၊ မရှုတ်၊ မပြုတ်နေခြင်း (Avoid making mistakes)
အလုပ်ထဲမှာအမှားတွေအများကြီးမလုပ်မိဘူးဆိုရင်တော့ သင်ဟာ အန္တရာယ်နဲ့ မတွေ့နိုင်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုအမှားမလုပ်တဲ့ အခြေအနေအတိုင်း ဆက်နေမယ်ဆ်ိုရင်တော့ သင့်အတွက် ရလဒ်ကောင်းတွေ ရမလာနိုင်ပါဘူး။ အန္တရာယ်တွေကိုရှာပါ။ အမှားတွေကိုလုပ်ပါ။ အဲ့ဒီကနေတဆင့် သင်ယူလိုက်ပါ။
၉။ ကိုယ့်အတွက်သာ ကိုယ်တွေးခြင်း (Thinking only of yourself)
အကောင်းဆုံးကွန်ယက်ချိတ်ဆက်နည်းဗျူဟာကတော့ သူတစ်ပါးကိုကူညီနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေရှာခြင်းပါပဲ။ သင်ဟာသင့်အတွက်ကိုပဲ ကြည့်နေတဲ့သူဆိုရင်တော့ သင်ဘယ်တော့မှာ ဝေးဝေးမရောက်နိုင်ပါဘူး။
၁၀။ ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို တန်ဖိုးမထားခြင်း (Not valuing your own happiness)
လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို နောင်တစ်ချိန်မှာပဲ ရှာတော့မယ်ဆိုပြီး ရွှေ့ဆိုင်းထားတတ်ကြတာဟာ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ အမှန်တရားတစ်ခုပါ၊ ဒါပေမဲ့လည်း တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ အဆုံးသတ်ဆိုတာ ရောက်မလာတတ်ပါဘူး။ အဓိက ဦးစားပေးရမှာက ဒီကနေ့ သင်ပျော်ပျော်နေဖို့ပါ။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ အလုပ်ကိုပြောင်းရွေ့ဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်မှာ ပိုမိုပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ဖို့ပါပဲ။
Linkedin.com မှ Bernard Marr ၏ Career Choices You Will Regret In 20 Years ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by Pyae Nyeinaung on October 26, 2015 at 13:10
Thank u very much for knowledge.
Permalink Reply by Saw Czy Phyo on October 26, 2015 at 13:30
so nice, this words are very useful in my life. They are encourage me every.Thank u very much.
Permalink Reply by Esther on October 26, 2015 at 13:31
Permalink Reply by Shin Min Aung on October 26, 2015 at 14:14
Permalink Reply by Myat Noe Thu on October 26, 2015 at 15:33
Thank for your knowledge sharing.
Permalink Reply by Khaing Wai Wai Zaw on October 26, 2015 at 16:49
Thanksalot Myanmar Network!
Permalink Reply by Ye Htun Lwin on October 26, 2015 at 19:23
This post is so good for me. Thanksalot.
Permalink Reply by Khin Myo Aey on October 26, 2015 at 19:26
Thank you so much for your knowledge share.
Permalink Reply by Khin Sandar Wynn on October 26, 2015 at 19:57
thank for good idea...
Permalink Reply by Aung Kyaw Myint on October 27, 2015 at 3:56
I like this post.If you haveachance pls sent more post like this ,And to live the life happily and successfully .
Permalink Reply by Htet Ko Ko Lwin on October 27, 2015 at 8:35
Thanks so much for your knowledge
Permalink Reply by wutyi linn on October 28, 2015 at 1:21
I will appreciate it.Thanks.